Shiinaha Jiinyeer Jumlada madax-qeybiyeyaasha,-saareyaasha - GRX DARYEELKA (HONG KONG) CO., LTD.
Hoyga >Alaabta >Madaxa jiinyeer
8 Nylon waxay xidhan tahay madax wareegaya
8kan naylon ee sifiican uxiran slider-ka wuxuu ka samaysan yahay zinc Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008. Nidaamka maaraynta tayada badeecada, si joogto ah u hagaajinaya qalabka kala duwan ee qalabka iyo barnaamijyada softiweerka, iskuna dayayaan inaad suuqa la qabsadaan tayo.
8 Nylon gadaal gadaal qulqulaya madaxa wareegga
8 kaniisad nylonReverse ah oo miiqda jiida madaxa Waxay ka samaysan tahay daawaha zinc Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay dhaaftay ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS oo ka gudbay kormeerka oo suuqa geliyey.
3 Nylon slider oo aan xirnayn
Tilmaamahan 3nylon ee aan xirnayn wuxuu ka samaysan yahay daawaha zinc ee Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS oo ka gudbay imtixaanka.
3 Birta xaraashka aan xirnayn
Tani Birta 3 Bir ee aan xirxirneyn waxay ka sameysan tahay isku darsanka Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS oo ka gudbay imtixaanka. Waxaa la galiyaa suuqa oo laga keenaa alaabo qumman.
3 Vislon slider oo aan xirnayn
Ilkahan 3glue ah oo aan qufulka La jiidan madaxa Madaxa waxaa laga sameeyaa aaladda zinc ee Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay dhaaftay ISO9001: shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS oo ka gudbay kormeerka oo suuqa geliyey. Nidaam dhammaystiran oo maareynta tayada wax soo saarka ah ayaa loo soo saaray si joogto ah loogu hagaajiyo badeecad kasta. Mashruuca barnaamijyada softiweeriga ah iyo qalabka dhismaha, kuna dadaal inaad si tayo leh suuqa ula qabsato.
5 Nâ y n ylon lahayn quful Madaxa jiid
5-taan naylon slider-ka ah ee qufulka aan xirnayn wuxuu ka samaysan yahay daawaha zinc ee Yurub iyo Ameerika. Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS oo ka gudbay imtixaanka. Waxaa la galiyaa suuqa oo laga keenaa alaabo qumman. Nidaamka maaraynta tayada shirkadu wuxuu si isdaba joog ah u hagaajiyaa qalabka kala duwan ee qalabka iyo softiweerka, wuxuuna ku dadaalayaa inuu suuqa ku qabsado tayo.